uBlock, yemahara uye yakajeka mwenje imwe kune adBlock Plus | Kubva kuLinux
uBlock, yemahara uye yakapusa isingaremi imwe nzira kune adBlock Plus
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Applications, Yakurudzirwa
1 Chii chinonzi uBlock?
2 UBlock kuita
3 UBlock Kuisirwa
Chii chinonzi uBlock?
Ublock Haisi chete ad blocker; icho chakanangana nechinangwa blocker. Iyo inovhara kushambadzira sezvo ichitsigira iyo Adblock Plus firita syntax, asi inowedzera syntax uye yakagadzirirwa kushanda neyetsika mafirita nemitemo. Sekureva kwevagadziri vayo, inosiya yakareruka CPU uye ndangariro tsoka uye, kunyangwe izvi, inogona kutakura uye kumisikidza zviuru zvemafirita anoshandiswa nevamwe vanozivikanwa vanovharira, senge AdBlock Plus (ABP) kana Ghostery. Aya mazita anosanganisira EasyList, EasyPrivacy, Malware Domains, uye zvimwe zvinokutendera iwe kuvharidzira matraki, eruzhinji mawadhi, uye nezvimwe zvakawanda. Izvo zvinounzawo rutsigiro rwemafaira mafaira uye zvinokutendera iwe kuwedzera zvimwe zvinyorwa, kuwedzera kune izvo zvinouya "kubva kufekitori".
uBlock anoshanda mune zvese Chromium / Chrome uye Firefox uye, kusiyana neGhostery, inogovaniswa uchishandisa iyo GPLv3 rezinesi, Achiita chishandiso che free software. Kunyange Ghostery ichinyatsoita, kwete chete haisi yemahara software asi iripo kufungira kwakakomba kuti kuburikidza ne "GhostRank" basa rinotengesa data pane yakavharidzirwa kushambadzira kumakambani ekushambadza ivo pachavo. Pane kudaro, ndinokurudzira kuti iwe uedze dzimwe nzira dzemahara, senge Dzinga o Ublock. Imwe pfungwa yekuisa mundangariro ndeyekuti uBlock -seizvo ABP, AdGuard, nevamwe vamwe- inobvumidza vashandisi kuisa mafirita avo, chimwe chinhu chisingakwanisike neGhostery kana Bvisa.
Mune ruzivo rwangu, kubvira uchishandisa uBlock, iyo yekumhanyisa kumhanya yatora inoshamisa chaizvo kusvetuka. Zvakare, mapeji ewebhu anotarisa "zvakachena" uye pasina zvakawanda zvakawandisa zvemukati kuti zvindivhiringidze. Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, kusiyana neAdblock Plus (ABP), uBlock anoshandisa zviwanikwa zvishoma. Heano mamwe machati ekuenzanisira kuratidza izvi.
Kuenzanisa kuongorora kwekushandisa ndangariro muChromium
Kuenzanisa kuongorora kwekushandisa ndangariro muFirefox
Kungoti uBlock anoshanda uye anoshanda hazvireve izvozvo vhara zvishoma trackers.
Mune mawonero angu, pfungwa iyi inoda yambiro pfupi. uBlock haavhariri nekumisikidza mamwe maawadhi eFacebook, Twitter, Google+, nezvimwe. izvo zvimwe zvinowedzera zvinovharira. Kune izvi, zvakafanira kumisikidza mamwe mafirita evatatu (ayo atove kuwanikwa muBlock), akadai seAnti-ThirdpartySocial kana Fanboy's Social blocking Chinyorwa. Muchidimbu, iwe unofanirwa kutamba uchitenderera pamwe nezvinyorwa kusvika iwe wawana iyo bhalanzi yauri kutsvaga. Imwe sarudzo, yakanyanya kuomarara, ndeyekugonesa sarudzo dzepamberi uye kuseta simba firita mitemo.
Kuisirwa kuri nyore kwazvo, iwe unongofanirwa kuisa yekuwedzera inoenderana newebhu browser yaunoshandisa.
Dhawunirodha uBlock yekuwedzera yeFirefox
Dhawunirodha uBlock yekuwedzera yeChromium / Chrome
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » uBlock, yemahara uye yakapusa isingaremi imwe nzira kune adBlock Plus
Ndatenda zvikuru, ndichazviedza. Yangu Firefox iri kunonoka kwazvo.
Ndanga ndichiishandisa kubva payakaburitswa muFirefox, inoshandisa chero chinhu uye inoshanda chaizvo.
Iwe unogona kutevera kuvandudzwa kwemunyori wekutanga muforogo yaakaita:
Block Origin, kuwedzera muFirefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve forogo, pakati peongororo yezvose zviri zviviri, uye pa wikipedia:
Zvingave zvakanaka kare, asi mashandiro acho angafananidzwa sei nehushe uye kugadzirisa iyo / etc / mauto? Iyi script yakanaka, kunyangwe isinga bvise iyo yekushambadzira iframes, zvichikonzera 404 kukanganisa kumakwa.
@jorgicio Ini ndashandisa mhinduro senge iyo iwe yaunoti, yakagadziridzwa / etc / inomiririra pamwe ne userContent.css kudzivirira iframes uye chero imwe mienzaniso yezvivharo zvakashambadzirwa pane peji. Zvirokwazvo kuita zvinhu seizvi kunogonesa kuita kweFirefox. Pano muLinLuxux shambadzira imwe yakanaka sarudzo, sezvaive iyo https://blog.desdelinux.net/privoxy-adblock-list-y-adios-publicidad/ uye yakaratidza kuwanda kweFirefox mashandiro akavandudzwa pasi peiyo gadziriso, padyo padyo neiyo ye userContent.css uye / etc / hosts.
Asi ini ndinogona kukuudza uine chokwadi chekuti uBlock akanaka kwazvo, ini parizvino ndine makumi maviri nematatu akavhurwa muFirefox, matatu ma consoles, vim uye geany akavhurika uye kunwa kwe21 Mb yeRam, kwete zvakaipa chaizvo.
Ini ndakakwanisa kuzviona, uye zvinokosheswa. Ndinovimba inowanikwa kune mamwe mabhurawuza, seOpera 😀
Parizvino, ndinonamira neublock kuti ndione kuti zvinofamba sei 😀
Ini ndinozvipindura: Hongu kune xD
Yakanakisa mupiro @usemoslinux, kubva kudiki inozivikanwa sarudzo asi ine simba. Yange iri nguva yakareba kubvira pandakamira kushandisa ABP ndichifarira script kuti ndigadzirise / etc / hosts ndichishandisa akateedzana ezvakanaka kwazvo zvinyorwa, pamwe neyakagadziriswa mushandisiContent.css kubvisa inosemesa chena. Izvi zvaizoburitsa zvimwe kushambadza, asi kuvandudzwa kwekuita kweFirefox kwaishamisa.
Ipapo ini ndakawana kuwedzeredza uku ndichivandudza script ye / etc / hosts, Ndakafunga kuzviedza uye ndinofanira kutaura kuti ndiri kushamisika, inochengetedza yakafanana nhanho yekuita se userContent.css uye inovandudza kushambadzira kwakawanda, pamwe nekuve nyore kuchinjisa ku whitelist kana kuwedzera zvinhu zvitsva, zvakangonaka.
Sergio S akadaro
Inofanira kujekeswa kuti kune maviri "uBlocks". Iyo yavakapa chinongedzo mutsamba ndiyo imwe yandinoshandisa, iyo "Chibviro" kunova kuenderera kwemugadziri wepakutanga kuchirongwa chake, mushure mekupa kune mumwe mugadziri basa rekuchengetedza bazi hombe reBlock chirongwa.
Paive nezvinhu zvakawanda zvisina kujairika ipapo, nekuti kune rimwe divi musimudziri wepakutanga akatora forogo yeake ega akapiwa chirongwa uye akaigadziridza uye anoigadzirisa kwazvo. Ivo vamwe vagadziri vakapinda mukukakavara kwakawanda pamusoro penyaya dzakasiyana, uye vakave vasina kufarirwa nevazhinji vashandisi ve blocker.
Muchidimbu, chenjera pavanosarudza. Block Origin ndiyo iyo yavanofanira kushandisa, sezvakakurudzirwa mutsamba. Ini ndinorishandisa kanenge kubva pazuva iro forogo rakabuda uye pasina matambudziko.
Uye zvakare, ini ndinoshandisa Yakavanzika Badger kunzvenga kuteedzera nekutevera izvo Ghostery yakambondipa, izvo zvandakamira kushandisa nekuda kwezvikonzero zvimwe chete zvakataurwa mutsamba.
Pindura Sergio S
Mutsamba iri mu chrome ndiyo mavambo, asi firefox ndiyo imwe xD
ndipo panobva firefox.
Kutenda nekujekeswa. Sezvandataura mune kumwe kutaura, panguva yekunyora chinyorwa ini ndanga ndisingazive nezve kuvapo kweublock uye ublock mavambo semapurojekiti akapatsanurwa. Chero zvazvingaitika, izvozvi zvese zvinongedzo mune ino chinyorwa zvinonongedza kuBlock mavambo ekuwedzera, ayo ari izvo zvinotsigirwa parizvino nemunyori wepakutanga.
Kune rangu divi, ma ads haana basa, asi kuteedzera kunondinetsa. Iwe ungakurudzira here kushandisa Yakavanzika Badger pamwe chete neDisconnect? Kana chimwewo chinhu?
Pindura kune heavyymetalmixer
Mhoroi, ini ndinoshandisa Yakavanzika Badger uye ndinonyatsoda nzira iyo inoshanda kuvharidzira yekutevera.
Sezvakataurwa, Ghostery haisi yakavhurika sosi uye kune fungidziro zhinji iyo inovhara ichitumira dhata kumakambani.
Panyaya yeDisconnect, ndakaishandisa kwechinguva uye yaishanda zvakafanana neGhostery. Iwe une rondedzero yeva trackers ayo anovharira uye ayo anoramba achivandudza. Handina chokwadi kana yakavhurwa sosi kana kwete, asi ndakarega kuishandisa nekuti haina kundikurudzira uye Ghostery yakashanda zvirinani.
Zvino, sezvo ini ndaida chimwe chinhu Open Open, ndakatsvaga ndikawana Chakavanzika Badger. Ini ndinojekesa kuti inoshanda zvakasiyana neiyo yapfuura 2. Nekutadza haina ichivharira asi inodzidza sezvaunoshandisa uye nekufamba kuti ndeapi ma tracker ayo anovharira kana kwete.
Kana iwe uchifarira kushandisa (nekuda kwekuchengetedza zvikonzero zvekuti hausi kuzopeta kumashure kumashure) ese Akavhurwa Sosi, Yakavanzika Badger inofanira kuve imwe yesarudzo dzakanakisa. Uye ishandise iri yega, pamwe neDisconnect uye Ghostery ita zvakafanana.
Nguva dzose nebasa rinoshanda, ndatenda Pablo.
Yakavandudza mashandiro angu muFirefox kaviri.
Kunze kwezvo, iyo inomiririra faira mu winXP uye mu linux yakafanana chaizvo, inenge yakafanana
Iwe unayo yakagadziridzwa pano: http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
Nemirairo yeWindows neLinux, hazvidiwe asi kuti pasave nekusahadzika.
Paulo Zuniga akadaro
Ndatenda neruzivo. Ini ndangozvidza adblock uye ikozvino ndine chishamiso ichi. Inoshanda 100% pa safari.
Pindura Paul Zúñiga
wow, ndinokutendai zvikuru nekukurudzira iyi yekuwedzera.
Pamakomputa angu ndanga ndichishandisa ABE, asi pakasarudzwa sarudzo yeFirefox Dev, yakamira kushanda saka ndakasarudza kumira kushandisa maitirwo ... asi zvinoita sekushanda zvakanaka ...
Ini ndanga ndichishandisa Adblock Plus kwenguva yakareba.
Ini ndaisa uBlock Chibviro uye zvinoita kunge zviri nani zvishoma, kunyanya palaptop yangu, iyo yatove zera. Ini handicherechedze zvakawanda mutafura yekudya kwemanheru.
Izvo zvandinazvo chimwe chinhu chekukanganisa nemazita mazhinji akafanana eBlock, uBlock Origin, µBlock ...
Ini ndaisa uBlock Chibviro, asi chokwadi ndechekuti ndakanga ndisingazive kuti ndeipi iri nani kuisa.
Ndakaverenga mune zvakataurwa naSergio S anokurudzira uBlock Akatangira, asi ini zvakare ndakaverenga masayiti kwavanokurudzira µBlock uye naBlock, kunyangwe neakavhiringidza mareferensi achitaura nezvechinhu chimwe uye kuisa zvinongedzo kune chimwe, muchokwadi, ichi chinyorwa chinokubatanidza naBlock ku Firefox naBlock Kutanga kweChannel.
Kunze kwekutaura nyonganiso, ini handina zano rekuti aya akasiyana mazita anoenderana anoenda sei, asi kana mumwe munhu akakwanisa kuisa odha diki uye kujekesa izvi zvishoma, ini ndingafarire.
Ndatenda, chero zvodii.
Chokwadi ndechekuti panguva yekunyora chinyorwa ichi, ini ndakanga ndisingazive nezve kuvapo kwaBlock naBlock mavambo. Chero zvazvingaitika, kuti zvive zvinowirirana, ini ndakangogadzirisa zvinongedzo kuti vese vanongedze kunaBlock mavambo.
Inotaridzika zvakanaka kwazvo, kwandiri handidi mabasa akawanda uye ndinoshandisa Bluehell uye inoshanda kwandiri.
Sezvo ini ndichiona kuti ublock inowanikwa muFirefox ndichaishandisa. Nhau dzakanaka kuziva izvozvo. Nenzira yandinotumira ABE kubhururuka sezvo iri kundipa hunhu hunogumburisa sezvo ichiisa zvimwe zvinhu pasina mvumo yangu, kunyanya inoonekwa palaptop yemusikana wangu. Uye izvo ndakazviisa ndichifunga kuti zvaive nani uu
Zvakanaka, maita katsamba. Ndakaifarira chaizvo 🙂
Iyo posvo inotsanangura yakanakisa kumisikidzwa ingave yakanaka, kuitira kuti kuwedzerwa kuve nekushanda kwese kweAdblock, uye Ghostery. Uye zvakare, ini ndaida kubvunza kana paine anoziva DoNotTrackMe ikozvino inonzi Blur uye iwe unofunga sei, kana ichivimbika?
Pindura kuna James_Che
Ini ndichafanirwa kuzviedza sekutsiva iyo Adbloc pakombuta yandinayo naXubuntu ine 1 Mb chete yekumusoro. Ini ndinoshandisa Firefox uye dzimwe nguva inova inononoka uye kupotsa kuita tsaona nekuti, mazuva ano, mamwe mapeji ewebhu anoisa zvinyorwa zvakawanda zvekuti hapana nzira yekufamba nayo.
Zvakanaka sei kuti ma block block aripo, dzimwe nguva kushambadza chete uye hapana zvemukati zvakatakurwa 🙁
ER KUNFÚ WEMA TRIANA akadaro
Izvo hazvivharidzi kushambadzira kwese, zvirinani mu yahoo mail. Kana iwe uine yahoo mail, pinda yako inbox uye uone kuti pamusoro peshoko rekutanga meseji rakagamuchirwa kune bhokisi iro, nguva nenguva, kushambadza kunoonekwa. Ndakagadzirisa mafirita nenzira churu uye iro bhokisi rine kushambadza kunofadza kunoenderera kuchioneka nguva nenguva, zvirinani kuti handizive kuibvisa.
Pindura ER KUNFÚ DE TRIANA
ublock inoshanda kwazvo pane chroium LMDE betsy
Pindura kuna jabelse
Saka zvakanaka, ndatenda nekugovana
Pindura kuna fer
Pindura kuna nyoroxuggk
Alfredo Bohorquez akadaro
Ndiri kukuudza nezve dambudziko rakamuka. Ini ndashandisa kushambadzira maturu ekushandisa, izvozvi adblockvanga varipo kwenguva yakareba uye zvinoshamisa kwandiri kuti nekufamba kwenguva vanova vashoma uye vashoma vanobatsira. Chinhu chine musoro chingave chakapesana, kuti ivo vanokwaniswa kana zvasvika pakuvharidzira zvemukati zvekushambadzira asi mawebhusaiti mazhinji aripo, iwe une blocker yauinayo, kana iwe unodya kushambadzira kana vanokumanikidza kurodha zvakare peji nekumisa iyo nekuti inoona iyo blocker. Ini ndaida kubvunza kana iwe uchiziva chero chinoshanda chaizvo chishandiso nhasi chekudzivirira kushambadza. Ndatenda!
Pindura kuna Alfredo Bohórquez
Remix Mini: Iyo purojekiti inovavarira kuunza Android kuPC zvakajeka
Ipa GIMP kutaridzika kwePhotohop